Matiu 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
4 Mmụọ nsọ wee duru Jizọs banye n’ala ịkpa+ ka Ekwensu nwaa ya ọnwụnwa.+ 2 Mgbe o busịrị ọnụ ụbọchị iri anọ,+ ehihie na abalị, agụụ gụwara ya. 3 Onye Ọnwụnwa+ ahụ bịakwara sị ya: “Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke,+ gwa nkume ndị a ka ha ghọọ achịcha.” 4 Ma ọ zara, sị: “E dere, sị, ‘Ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ, kama ọ bụ okwu niile nke na-esi n’ọnụ Jehova pụta.’”+ 5 Mgbe ahụ, Ekwensu kpọọrọ ya banye n’obodo nsọ ahụ,+ o wee mee ka o guzoro n’elu ihe a rụbichiri na mgbidi ụlọ nsọ 6 wee sị ya: “Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si ebe a wụda;+ n’ihi na e dere, sị, ‘Ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị, ha ga-eji aka ha ghọrọ gị, ka ị ghara ịkpọ ụkwụ na nkume mgbe ọ bụla.’”+ 7 Jizọs wee sị ya: “E dekwara, sị, ‘Elela Jehova bụ́ Chineke gị ule.’”+ 8 Ọzọ, Ekwensu kpọọrọ ya gaa n’ugwu dị oké elu ma gosi ya alaeze niile nke ụwa+ na ebube ha, 9 wee sị ya: “Ihe a niile ka m ga-enye gị+ ma ọ bụrụ na ị daa n’ala fee m ofufe.”+ 10 Jizọs wee sị ya: “Si ebe a pụọ, Setan! N’ihi na e dere, sị, ‘Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe,+ ọ bụkwa naanị ya+ ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ.’”+ 11 Ekwensu wee hapụ ya,+ ma, lee! ndị mmụọ ozi bịara wee malite ijere ya ozi.+ 12 Ma mgbe ọ nụrụ na e jidewo Jọn,+ ọ pụrụ wee banye n’ime Galili.+ 13 Mgbe ọ hapụkwara Nazaret, ọ bịara biri na Kapaniọm+ n’akụkụ oké osimiri dị n’ógbè Zebulọn na Naftalaị,+ 14 ka e wee mezuo ihe e kwuru site n’ọnụ Aịzaya onye amụma, sị: 15 “Gị ala Zebulọn na ala Naftalaị, ndị dị n’ụzọ oké osimiri, n’ofe Jọdan, Galili+ nke ndị mba ọzọ! 16 ndị nọ n’ọchịchịrị+ hụrụ oké ìhè,+ ìhè+ nwukwasịkwara+ ndị nọ n’ógbè nke onyinyo ọnwụ.” 17 Malite n’oge ahụ gaa n’ihu, Jizọs bidoro ikwusa, sị: “Chegharịanụ,+ n’ihi na alaeze+ eluigwe eruwo nso.” 18 Ka ọ na-aga n’akụkụ oké osimiri Galili,* ọ hụrụ ụmụnne abụọ, bụ́ Saịmọn+ onye a na-akpọ Pita+ na Andru nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ azụ̀ n’ime oké osimiri, n’ihi na ha bụ ndị na-akụ azụ̀. 19 O wee sị ha: “Soronụ m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ.”+ 20 Ozugbo ahụ, ha hapụrụ ụgbụ ha+ wee soro ya. 21 Mgbe o sikwa ebe ahụ gakwuo n’ihu, ọ hụrụ mmadụ abụọ ọzọ+ bụ́ ụmụnne, Jems nwa Zebedi+ na Jọn nwanne ya, ka ha na Zebedi nna ha nọ n’ụgbọ mmiri na-edozi ụgbụ ha, o wee kpọọ ha. 22 Ozugbo ahụ, ha hapụrụ ụgbọ mmiri ahụ na nna ha wee soro ya. 23 O wee gazuo+ Galili dum,+ na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ ha,+ na-ekwusakwa ozi ọma alaeze ahụ, na-agwọkwa ụdị ọrịa ọ bụla+ na ụdị nsogbu ahụ́ ike ọ bụla ndị mmadụ nwere. 24 Akụkọ banyere ya gazuru Siria dum;+ ha wee kpọtara ya ndị niile ahụ́ na-adịghị mma,+ ndị ọrịa na mmekpa ahụ́ dị iche iche na-esogbu, ndị mmụọ ọjọọ ji na ndị akwụkwụ+ na ndị ahụ́ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, o wee gwọọ ha. 25 Ya mere, oké ìgwè mmadụ si na Galili+ na Dikapọlis na Jeruselem+ na Judia na ofe Jọdan soro ya.
“N’ezie, ọ bụ ọdọ mmiri; Baịbụl kpọkwara ya ọdọ mmiri Genesaret, Osimiri Galili, nakwa Osimiri Taịbirias.”